🥇 ▷ Samsung Galaxy Note 10 vs iPhone XS: midkee ayaa lagu iibsadaa qiimo la mid ah? ✅
Samsung Galaxy Note 10 vs iPhone XS: midkee ayaa lagu iibsadaa qiimo la mid ah?
In kasta oo Samsung Galaxy Note 10 Waxaa horey loo soo bandhigay oo mar horeba ku jiray marxaladda iibinta kahor, ma noqon doonto illaa iyo bisha Ogosto 23 ee ay bilaabaneyso inay gaarto gacmaha milkiilayaashii ugu horreeyay. Dhanka kale, waxaan sii wadaynaa fulinta isbarbardhigayaga caadiga ah si aan u aragno halka tartan Samsung uu ku jiro ogeysiiskan ka dib. Maanta waxaan u soconaa isbarbar dhig Galaxy Note 10 iyo iPhone XS inaad warqad ku aragto farqiga u dhexeeya iyo faa’iidooyinka ugu weyn ee midba midka kale u leeyahay.
In kasta oo mudnaanta la siinayo ay tahay qiyaastii laba telefoon oo casri ah oo aad u kala duwan, labaduba waxay ku tartamaan heerar sare iyo sidoo kale qiyaastii qiimo aad u la mid xilligan. Sidaa darteed, isticmaaleha waxaa laga yaabaa inuu haysto shaki ka dhexeeya ku sharaxida Samsung cusub ama ka faa’iideysto dhimisyada ay hadda leeyihiin iPhone XS. Maaddaama maalgashigu uusan yareyn, waa inaan hubnaa waxa aalad ku habboon baahidayada
– Samsung Galaxy Note 10 iPhone XS
shaashadda 6.3 ″ firfircoon AMOLED FHD + (2280 x 1080 pixels) 401 dpi / 19: 9
5.8 ”Super Retina FullHD + (2,436 × 1,125 pixels) 458 dpi / 19.5: 9
Cabbirka iyo culeyska 151 x 71.8 x 7.9 mm / 168 garaam
143.6 x 70.9 x 7.7 mm / 177 garaam
Processor Exynos 9825, Octa-Core 2.7 GHz oo laga sameeyay 7nm oo ay kujirto Mali G76 MP12 GPU A12 Bionic. Hexa-Core
Kaydinta 256 GB 64/256/512 GB
Kaameera – Rear 12 MP (f / 1.5-2.4, PDAF, OIS) + 12 MP (f / 2.1, OIS, 2x optical zoom telephoto) + 16 MP (f / 2.2, xagal ballaadhan)
– 10 MP horteeda (f / 2.2, PDAF) – Labaal 12 MP + 12 MP leh f / 1.8 iyo f / 2.4 aromure iyo LED flash + OIS
– 7 MP horteeda leh f / 2.2 aperture
Isku xirnaanta Bisadda LTE. 20, Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac / ax, dual-band, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0 A-GPS, GLONASS, NFC, sawir qaade sawirka faraha ka hooseeya shaashadda 4G, Wi-Fi 802. ac Bluetooth 5.0, GPS, Xiriiriyaha hillaaca
Adiga Android 9 Gee oo leh hal UI ah
macruufka 12 loo cusbooneysiin karo iOS 13
Durbaan 3,500 mAh oo ku dallacaya si dhakhso leh oo koronto la’aan ah iyo koronto la’aan (10 W) 2,658 mAh oo leh lacag dhakhso ah
Qiimo 959 euro Laga soo bilaabo 1,067 euro
Waxa ugu horeeya ee aan eegno waa qaabeynta iyo cabirka shaashadda. Dareenkan, qofna kama baxsado in Samsung Terminal-ka uu tallaabo qaado, isaga oo xawaaraha ugu dheereeya ku dhejiya kamaradaha shaashadda si uu u bixiyo khibrad dhan oo shaashad ah. The iPhone XS qaybteeda isboortiga waa muuqaal muuqaal u eg midabka indhaha ah oo ay sii kordhisay warshaduhu. Marka la eego cabirka, Galaxy Note 10 wuxuu gaarayaa 6.3 inji, marka la barbar dhigo 5.8 inji ee iPhone XS. Dhanka culeyska iyo dhumucda, labada kooxba waa cadaalad xitaa. Samsung ayaa gaadhaysa miisaanka ugu hooseeya iyada oo leh 168 garaam, halka iPhone uu isna sidaas oo kale yeelanayo dhumucdiisuna tahay 7.7 milimitir.
Heerka processor-ka, cadaalad ma ahan in la barbar dhigo Galaxy Note 10 iyo iPhone XS. Shirkadda cusub ee Samsung ayaa leh Exynos 9825 cusub oo leh 7 nm ultraviolet lithography. Samsung chip wuxuu leeyahay horumarkii ugu dambeeyay ee maaraynta tamarta iyo sirdoonka macmal. Dareenkan ayaa ah chip ka horumarsan marka loo eego A12 Bionic, in kasta oo marka la eego dhanka awooda ay ka badan yihiin ama ka yar yihiin. A13 Bionic oo sida muuqata caan ku ah iPhone 11, wuxuu noqon doonaa musharrax inbadan oo saf ah si loola dagaallamo Exynos 9825. Galaxy Note 10 wuxuu leeyahay 8 GB oo RAM ah marka loo barbar dhigo 4 GB oo ah iPhone XS RAM, labada kombiyuutarna waxay qaadi karaan 256 GB oo ah xusuusta gudaha, inkasta oo iPhone XS uu gaari karo 512 GB.
Dhanka qaybta sawirka, wali waa goor hore in la arko waxa Galaxy Note 10 ah, laakiin waa inay noqotaa mid aad u awood badan kana fog wixii lagu arkay Galaxy Note 9. Terminalka wuxuu kuxiraa kamarad gadaal seddexji leh oo leh dareemayaal 12 + 12 + 16 megapixels, halka kamaradda hore ay gaadhayso 10 megapixels. IPhone XS waxaa lagusoo qaatay kamarado gadaal gadaal ah 12 + 12 megapixels iyo hore 7 megapixels.
Nidaamka hawlgalka iyo bateriga
Nidaamyada hawlgalka ee labada marin ayaa door muhiim ah ka ciyaara xilliga iibsashada. Galaxy Note 10 wuxuu leeyahay Android 9 Pie iyo Samsung’s One UI lakabka, in kasta oo lagu cusbooneysiin doono Android Q marka nooca xasilloonida uu yimaado dhowr bilood. Isla sidaas ayaa loogu talagalay iPhone XS, kaas oo hadda la shaqeeya iOS 12, laakiin si dhakhso ah ayaa loo cusboonaysiin doonaa iOS 13. Labada nidaam ee hawlgalka cusub ayaa ku xardhan astaamo cusub, oo ay kujirto Madowga Madowga ah ee la filayo. Qaybta batariga waxaan ku kala duwannahay weynka 3,500 mAh ee Galaxy Note 10 marka la barbar dhigo 2,658 mAh ee Note 10. Labaduba waxay leeyihiin dallacaad deg deg ah inkasta oo Galaxy Note 10 sidoo kale ay leeyihiin lacag celin.
Aad u xitaa qiimaha
Haddii aan eegno qiimaha, waxaan aragnaa inaan iibsan karno a Galaxy Note 10 oo ah 959 euro halka iPhone XS, in kasta oo ay yareynayso, haddana wali qarash buu leeyahay 1,067 euro. Ma ahan faraq aad u weyn oo u dhexeeya labada, laakiin iyada oo la tixgelinayo farqiga ku-meelgaarka ah iyo horumarka u dhexeeya midka iyo tan, dheelitirka iibsiga, haddii aadan ka gaarin dhexdooda, deyn u sii galaya Galaxy Note 10-ka cusub.